Ny OnePlus 9 sy OnePlus 9 Pro dia hampiditra charger ao anaty boaty | Androidsis
Ny OnePlus 9 sy OnePlus 9 Pro dia hampiditra charger ao anaty boaty
Isaky ny misy fiovana eo amin'ny tontolon'ny telefaona, mandritra ny volana voalohany (indraindray aza ny taona), vaovao izany raha toa ka manaraka ny fironana mitovy ny mpamokatra sisa. Noho ny fanjavonan'ny kapila finday avy amin'ny iPhone 7 sy 7 Plus, mpanamboatra maro no nanaraka io fironana io, ary iray amin'ireo farany nanao izany i Samsung.
Miaraka amin'ny fanjavonan'ny charger amin'ny boaty an'ny iPhone 12 vaovao, dia lasa fampahalalana izay ampiasain'ny mpampiasa maro io te hahafantatra hoe rahoviana no hanavao ny fitaovan'izy ireo. Samsung dia nanara-dia haingana ny làlana iray ihany, fa amin'izao fotoana izao, toa izy irery ihany no sisa nataon'ny mpanamboatra, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao.
Afaka herinandro vitsivitsy dia mikasa ny OnePlus ampahafantaro ny OnePlus 9 sy OnePlus 9 Pro, terminal misy ny sary izay efa nanomboka nivezivezy ary horonan-tsary momba ny endriny, fa koa, ny atin'ny boaty. Max Jambor, fantatra fa mpampita ny ekosistra Android, dia manamafy fa ity maodely vaovao ity dia hampiditra ny charger ao anaty boaty an'ny taranaka vaovao amin'ny laharana OnePlus 9.
Ity fanapahan-kevitra ity dia mety antony roa no manosika azy. Ny voalohany dia ny OnePlus tsy mivarotra terminal be eny an-tsena toa an'i Samsung sy Apple isan-taona. Ankoatr'izay, tsy azo inoana mihitsy hoe mpampiasa izany manana adapter famandrihana mifanaraka amin'ny Warp Charge, ka tsy ho teboka tsy mitovy amin'ny sisa amin'ireo mpamokatra.
Ny antony faharoa dia izao: rafitra mamaly haingana OnePlus, rafitra fiampangana hatramin'ny 65W izay nireharehan'ny orinasa maro tato ho ato, na dia naseho tamin'ny fotoana maro aza fa ity rafitra fiampangana ity miharatsy haingana kokoa ny fahasalaman'ny bateriaNoho izany, samy Samsung sy Apple dia mbola tsy mampihatra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Ny OnePlus 9 sy OnePlus 9 Pro dia hampiditra charger ao anaty boaty
Xiaomi dia mbola mpanamboatra izay mivarotra finday be indrindra ao Espana, ary tsy ampoizina amin'ny OPPO!
Ny Galaxy S20 FE no finday avo lenta Samsung voalohany nahazo One UI 3.1